Maamulka Gobolka Bakool oo deeq gaarsiiyay qoysas barakacayaal ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka Gobolka Bakool oo deeq gaarsiiyay qoysas barakacayaal ah
Maamulka Gobolka Bakool oo deeq gaarsiiyay qoysas barakacayaal ah
Maamulka Gobolka Bakool ayaa maanta deeq raashiin gargaar ah oo ka timid Jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Switzerland gaar ahaan Magaalada Zurich gaarsiiyey degaanka Tuboy oo ka tirsan Gobolka Bakool.
Deeqdaan oo ka kooban Bariis iyo Saliid ayay Jaaliyaddu u soo wakiishteen in deeqdaan lagaarsiiyo Gobolka Bakool Cashar Xasan Cumar iyo Maxamed Abshir Kaahiye , waxaana ka faa’ideystay 70 qoys oo degan tuulada Tuboy oo noloshoodu aad u liidatay.
Gguddoomiye kuxigeenka Gobolka Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur oo deeqdaan la socday ayaa u mahadceliyay Jaaliyadda Soomaaliyeed oo deeqdaan walaalahooda u soo dhiibay, wuxuna sheegay in cidii ku haboonayd ay gaarsiiyeen.
Guddoomiye ku-xigeenka Gobolka ayaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ka codsaday in gurmad kooda ay sii laba laabaan maadaama Gu’ga uusan weli ka di’in degaanada Gobolka Bakool.
Degaankaan waxa magaalada Xuddur u jiraa 8km dadka ku nool waa muruqmaalato waxaana noloshooda saamaysay abaarta, mana haystaan Ceelal ay biyo ka cabaan waxay dhabarkooda u soo biyo dhaansi tagaan magaalada Xuddur ee xaruunta Gobolka Bakool.
Previous articleUgaas Maxamed wali oo ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan deeganno hoostaga Balcad
Next articleMaamulka Goboleedka Jubbaland oo sheegay inay hoos u dhacday Awoodii Shabaab